Mid ka mid ah halyeeyada kooxda Manchester United oo talo muhiim ah u diray da’ayarka reer England Marcus Rashford – Gool FM
(Manchester) 31 Okt 2018. Da’ayarka kooxda Manchester United ee Marcus Rashford ayaa ka helay talo muhiim ah mid ka mid ah halyeeyada Red Devils, si uu xiliyada soo aadan kaga soo muuqdo saaxada kubada si ka fiican sidii hore.
Kabtankii hore kooxda Manchester United Bryan Robson ayaa sheegay in Marcus Rashford uu u baahan yahay inuu horumariyo awoodiisa gooldhalineed, isla markaana uu isku dayo xili ciyaareed kasta inuu dhaliyo 20 ilaa iyo 30 gool.
Dhinaca kale Bryan Robson ayaa wuxuu sheegay inuu ku faraxsan yahay in Rushford uu kor u qaaday awoodiisa ciyaareed kulamadii lasoo dhaafay, laakiin wuxuu sheegay inu u baahan yahay in uu shaqo adag sii qabto si uu talaabo cusub ugu qaado hormarka xirfadiisa kubada cagta.
“Waxa kaliya ee aan rabo inaan arko ayaa ah inuu horumariyo awoodiisa, isla markaana uu la tacaalo fursadaha jira”.
“Marcus Rashford wuxuu dhalin karaa 20 ilaa iyo 30 gool xili ciyaareedkii, hadii uu ka ciyaaro weerarka garabka ah ama weerar toos ah”.
Liverpool oo qorsheeneysa in dalab qaali ah ay ka gudbiso mid ka mid ah xidigaha ugu muhiimsan horyaalka La Liga